Olole tallaal oo ka bilawday koofurta Soomaaliya - BBC Somali - Warar
Olole tallaal oo ka bilawday koofurta Soomaaliya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 27 Mey, 2013, 15:55 GMT 18:55 SGA
Olole tallaal ee dalka Soomaalia
Hay'adaha Qaramada Midoobay u qaabilsan caafimaadka, WHO, iyo xannaanada carruurta, UNICEF, oo ay wada shaqeynayaan dowladda Soomaaliya ayaa maanta olole tallaal oo ballaaran ka bilaabay gobollo ka tirsan koofurta Soomaaliya.
Carruurta gobollada Gedo iyo Jubbooyinka ayaa waxaa laga tallaalayaa cudurka Dabeysha. Cudurkan ayaa markii ugu horreysay muddo lix sano ah waxaa laga soo sheegay inuu ka jiro magaalada Muqdisho. Waxaana berrito halkaas ka bilaabanaya wejiga labaad ee ololaha tallaalka cudurka dabeysha ee carruurta ku nool magaalada caasimadda ah.
Waxaa laga cabsi qabaa inuu cudurku ku fido deegaanno kale maadaama uusan jirin olole tallaal oo gobollada koofurta iyo bartamaha Soomaaliya laga hirgeliyay muddo sannado badan ah sababtoo ah baa la yiri dhulkaas oo ay ka talin jireen Xarakada Al-shabab. Shire Cabdi Maxamed oo ah iskuduwaha caafimaadka ee wasaaradda arrimaha bulshada ee Soomaaliya u jooga gobolka Gedo waxaa uu BBC u sheegay in carruur ka badan 600 oo kun oo da'doodu shan sano ka yar tahay la tallaali doono inta ololahani uu ka socdo gobollada koofurta Soomaaliya.
Isra'iil "oo baarayso" duqeynta Iskuulka UN ee Qaza
Ebola: Liberia oo la xiray iskuulada 30 Luulyo 2014
Isticmaalka budada cad